Super Mario Run ကိုမတ်လတွင် Android တွင်တွေ့မြင်ရမည် Androidsis
Super Mario Run ကိုမတ်လတွင် Android တွင်အသုံးပြုမည်
ဟိုဆေး Alfocea | | Android ဂိမ်းများ, စူပါမာရီယို Run ကို
Pokémon GO နှင့်ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၆ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် Super Mario Run ကိုစတင်မိတ်ဆက်ခြင်းသည်မိုဘိုင်းဂိမ်းများအတွက်အရေးအကြီးဆုံးအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်သော်လည်းလူကြိုက်များသည့်ရေပိုက်သမားသည် Manzana ၏ iOS ထုတ်ကုန်များတွင်သာအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်၎င်းကိုယခင်ကကြေငြာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်းနေ့ရက်အတိအကျကိုမူမဖော်ပြရသေးပေ။ ယခုအချိန်သည်အလွန်တိတိကျကျဖော်ပြခြင်းမရှိသေးသော်လည်း Android ထုတ်ကုန်များပေါ်သို့ရောက်ရှိရန်အတိအကျရက်စွဲရှိသည်။ Nintendo က Super Mario Run ကို Google Play Store တွင် Android အတွက်လာမည့်မတ်လတွင်ရောင်းချမည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်.
1 Super Mario Run ကို Android စက်များဖြင့်ဆင်းသက်ရန်ပြင်ဆင်သည်
2 မီးအထိမ်းအမှတ်သူရဲကောင်းများသည် Super Mario ပြေးပွဲထက်ပိုသည်
Super Mario Run ကို Android စက်များဖြင့်ဆင်းသက်ရန်ပြင်ဆင်သည်
အကယ်လို့သင့်မှာ Android စက်ရှိပြီးသင့်စမတ်ဖုန်း (သို့) တက်ဘလက်မှာ Mario နဲ့ကစားဖို့သေသွားရင်အခုချိန်မှာ countdown ကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။ နှစ်လမပြည့်မီ၊ Super Mario Run ကိုဒေါင်းလုတ်ရယူနိုင်သည် ဂူဂဲလ်အက်ပ်စတိုးတွင်ရှိသည်။
Super Mario Run သည်ဒီဇင်ဘာလလယ်တွင် iOS အတွက်သီးသန့်ပွဲထုတ်ခဲ့သည်။ သုံးလအကြာတွင်၎င်းသည် Android သုံးစွဲသူများအားလုံးအတွက်ရရှိနိုင်သည်
Nintendo ၏အဆင့်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည် ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခြင်း Super Mario Run အတွက် Android အတွက်ပြီးခဲ့သည့်လကဖြစ်သော်လည်းဖြန့်ချိမည့်ရက်ကိုအတိအကျမပြောနိုင်ပါ။ အခုကျွန်တော်တို့မှာရှိနေပေမယ့်မတ်လမှာရောက်မယ်ဆိုတာငါတို့သိကြတယ်။
နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းမရှိပါက Nintendo သည် Android ပေါ်တွင် iOS ထုတ်ကုန်များတွင်စတင်ခဲ့သည့်အတိုင်းပင်ဖြစ်သည်။ Super Mario Run သည်အခမဲ့ download ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူများသည်ကစားရန်အဆင့်သုံးဆင့်ကိုပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီးယူရို ၉.၉၉ ကို ဆက်၍ မပေးရ။ ကောင်းမွန်သောသတင်းတစ်ခုမှာ၎င်းသည်သင်ဝယ်ယူရမည့်တစ်ခုတည်းသော in-app ၀ ယ်ယူမှုဖြစ်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်စျေးနှုန်းနှင့်သင်အပြည့်အ ၀ ကစားနိုင်ပြီးဖြစ်သည်။
ဂိမ်းကိုမသိသောသူများအတွက် (Nintendo နှင့် Apple တို့၏အလွန်အကျွံစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုအပြီးတွင်ယုံကြည်ရန်ခဲယဉ်းသည်) Super Mario Run သည်“ အဆုံးမဲ့ပြေးသမား” ဖြစ်သည်။ ဇာတ်ကောင်များသည်အသုံးပြုသူသည်သူ၏အမြန်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း (သို့) back up မလုပ်ဘဲ screen ၏ဘယ်ဘက်သို့စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးသည်။ ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုသည်ရိုးရှင်းသော်လည်းသင်ဂိမ်းမှတဆင့်တိုးတက်လာသည်နှင့်အမျှရှုပ်ထွေးလာသည်။ ၎င်းကိုလက်တစ်ချောင်းတည်းဖြင့်ကစားနိုင်သည်၊ အမှန်မှာ၊ လက်ချောင်းတစ်ချောင်းဖြင့်သာကစားနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာအားလုံးသည်မျက်နှာပြင်ကိုထိခြင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်သင့်တော်သောအချိန်တွင်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
မီးအထိမ်းအမှတ်တွေကိုသူရဲကောင်းများ ရှေ့တွင် စူပါမာရီယို Run ကို
မာရီယိုနှင့်သူ၏စွန့်စားမှုများလာမည့်ရောက်ရှိမှုကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်အတူ \_ t Nintendo ကသူ့ရဲ့မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေအတွက်နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခုထွက်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ မီးအထိမ်းအမှတ်တွေကိုသူရဲကောင်းများ, Android စမတ်ဖုန်းများအတွက်ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်တရားဝင်ရောင်းချမည်
ဒီဂိမ်းအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်အချက်အလက်အနည်းငယ်သာသိပေမယ့် Nintendo ကုမ္ပဏီကမနေ့ကအွန်လိုင်းဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ“ သင်၏ဒဏ္chooseာရီကိုရွေးချယ်ပါ” ခေါင်းစဉ်အောက်မှာလှုပ်ရှားမှုအသစ်တစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတွင်သုံးစွဲသူများသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်များက Fire Emblem ဂိမ်းဗားရှင်းမှနှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်များအတွက်မဲပေးနိုင်သည်။ ဒီမဲပေးပွဲမှာအနိုင်ရသူတွေကဒီနှစ်မှာတော့အထူးဗားရှင်းတွေနဲ့ထွက်လာမှာပါ။
မီးအထိမ်းအမှတ်တွေကိုသူရဲကောင်းများSuper Mario Run နှင့်မတူသည်မှာဟုတ်ပါသည် optional ကို In-app ကိုဝယ်ယူမှုတို့ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ ကုမ္ပဏီကြေငြာထားသည့်အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မည် Android Device များအတွက် Google Play Store တွင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်တွင်ရနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး iPhone နှင့် iPad အတွက်မကြာမီရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်သည်။.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Nintendo ကမိုဘိုင်းထုတ်ကုန်များအတွက်ဂိမ်းငါးမျိုးထုတ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမျှော်လင့်ချက်လေးခုသို့ကျဆင်းသွားသော်လည်းစတုတ္ထမြောက်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် တိရိစ္ဆာန် Crossing၎င်း၏ရောက်ရှိသည့်ရက်စွဲကိုမသိရသေးသည့်အရာ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Super Mario Run ကိုမတ်လတွင် Android တွင်အသုံးပြုမည်
LG ကဖေဖော်ဝါရီ ၂၆ ရက်မှာ MWC 26 မှာအထူးပွဲကိုကြေငြာလိုက်ပါတယ်